छोरी जिताउन काङ्ग्रेस रोजेका प्रचण्डले आफू जित्नको लागि एमाले रोजे : धनराज वास्तविक । – Himalitimes
छोरी जिताउन काङ्ग्रेस रोजेका प्रचण्डले आफू जित्नको लागि एमाले रोजे : धनराज वास्तविक ।
२०७४ आश्विन २० २२:१५ मा प्रकाशित
वाम एकताको नाममा अहिले राजनीति कोर्स परिवर्तन भएको छ । माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालिम पछि पार्टी एकीकृत गर्ने बताई सकेको छ । राजनीतिमा ईमान्दारिताको आवश्यक छ भन्ने केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि अर्को पटक नराम्रो सङ्ग चुकेका छन ।स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सङ्ग घाटि जोडेर चितवन महानगरमा छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन सफल भएको धेरै भएको छैन ।
एमाले रोज्नुको कारण !
माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा अस्तित्व सुरक्षित गर्नको लागि यो रणनीतिमा धुरन्धर लागि परेको कुरा धेरैलाई थाह छैन । चितवनबाट प्रचण्डको जित काङ्ग्रेसको संगतले सफल नहुने देखेपछी काङ्ग्रेसलाई लात हान्न सफल भएका छन । करिब ७ दशक लामो गृहकार्य पछि वाम एकताको प्रक्रिया सुरु भएको स्थितिमा लोकतान्त्रवादिहरु जुरमुराउन थालेका छन । प्रचण्डको दुतका रुपमा जनार्दन शर्मा र केपी ओलीको दुत बनेर बामदेव गौतम, विष्णु पौडेलले यो वाम एकताको सुत्रपात जनताको बीचमा ल्याएका हुन ।
किन भयो राजनिती कोर्स परिवर्तन ?
राणा शासन, राजतन्त्र र नेपालको ससदिय व्यवस्थालाई आफ्नो भलाइको आधारित रहेर आधिपत्य जमाई रहेको भारत एकाएक नेपाल देखि दुर भएको छ ।
राजतन्त्र पछिको शासन व्यवस्थालाई आफू अनुकुल बनाउन भारतले कडा परिश्रम नगरेको भने होइन । नेपाली जनता र नेता स्वभिमानका गित गाउन र राष्ट्रियताका बाजा बजाउन माहिर छन । राजनीति उपनिवेश, आर्थिक उपनिवेश, शैक्षिक उपनिवेशलाई स्विकार्दै नेता बनेका लोकतान्त्रिक र वामपन्थीहरुले भारतबाट पाउने आइसीले महल नबन्ने भएपछि डलर सुरक्षित गर्नको लागि राजनीति कोर्स फेरेका हुन भन्न अड छैन ।
राजनीतिक विश्लेषण अनिल योगीको शब्दमा यदि मिलेर देश बेच्नु थियो र मिलेर भस्ट्रचार गर्नु थियो भने किन मारिए जनयुद्धमा १७ हजार मानिस ? सत्ता र भत्ताको खेलमा जे सुकै गर्न राजी हुने परम्पराले आज त मोज नै होला तर भोलिको बिहान मधुरो हुने निश्चित छ्।
(धनराज वास्तविक युवा साहित्य तथा राजनीतिक विश्लेषण हुन)
नेकपा एमाले कैलाली द्धारा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको नाम सिफारिस, समानुपातिकका लागि भने भोली टुंगो लगाउने ।
घरायसी बिबादका कारण पाल्पामा एक बृद्धको हत्या ।